Wasiir Xaglatoosiye oo Sheegay Inay Xakameeyeen Shuban-biyood ka Dilaacay Wajaalle |
Wasiir Xaglatoosiye oo Sheegay Inay Xakameeyeen Shuban-biyood ka Dilaacay Wajaalle
Hargaysa (GNN)- Wasiirka Wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa shaacisay in ay ku guulaysatay xakamaynta xanuuno kala duwan oo ka dhashay abaarta dalka jirta, oo ka dilaacay degaamo kala duwan oo gobollada dalka ka mid ah.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Saleebaan Ciise Axmed (Xaglo-toosiye), oo ay wehelinayeen wasiiru-dawlaha iyo agaasimaha guud ee wasaaradaasi oo shalay shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa ayaa tilmaamay in dedaal badan oo ay sameeyeen kadib ay ku guulaysteen in ay tir-tiraan cuduro ay sababtay abaartu oo ay ka mid yihiin shuban-biyood, Oof-wareen iyo nafaqo-dari.
Wasiir Xagl-toosiye, waxa uu sheegay in magaaladda Wajaale oo ka mid ahayd meelaha ugu daran ee mudooyinkii u danbeeyay cusbitaalka loo jiifiyay dad aad u badan oo uu soo ritay shuban-biyoodku in ay dadkaasi daaweeyeen, isla markaana aanay jirin saddexdii maalmood ee la soo dhaafay dad lagu arkay xanuunkaasi. Dr. Xaglo-toosiye, oo ugu faah-faahin ka bixinayay hawlaha dedaalka caafimaadka ee wasaaradiisu wado waxa uu yidhi “Wasaaradu waxay ku jirtaa xaalad deg deg ah, oo ah xakamaynta cuduradda ay keenaan abaaruhu. Waxaananu bilawnay dedaal aad u weyn, waxaananu daawooyin iyo xirfadleyaal caafimaad gaadhsiinay dhamaanba goboladda dalka, degmo kasta iyo goob kasta, dhamaanba agaasime-waaxeedyadii wasaaradu goboladda ayay ku kala maqan yihiin meelo kala gedisan iyagoo koox kala duwan wata.
Daraf ilaa daraf, dalkoo dhan kooxo ay wasaaradu dirtay ayaa ku wareegaya, daawooyinkii iyo wixii loo baahnaana way gaysay. Dedaalkaasi faraha badanina waxa uu dhalay, in aanu hoos u dhigno fiditaanka xanuunadii ay keenayeen abaaruhu, oo ay ka mid yihiin shuban-biyoodka, Oof-wareenka iyo nafo-daridda.”
Isagoo hadalkiisa sii watayna waxa uu yidhi, “Waxaa farxad weyn noo ah in aan maanta (shalay) sheegno, meesha ugu daran oo ahayd Wajaale, waxaananu ku guulaysanay in aanu ka dhigno mid aan jirin (Zero Level) shuban-biyood hore dad uu soo ritay cusbitaalka loo dhigay. Iyadoo imika warbixinaha aanu helayno saddexii maalmood ee u danbeeyay ma jiraan wax shuban-biyood ah oo Wajaale nalooga soo sheegay, am aka dhacay, taasina waxay ku timid dedaalka shaqaalaha wasaaradda caafimaadka.”
Geesta kale wasiirku wuxuu sheegay in ay wasaaradda caafimaadku sii wadi doonto hawlaha lagu xakamaynaayo ka hor tegista iyo daawaynta cuduradda ka dhashay abaarta. Isagoo u mahad celiyay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka sida wanaagsan ee ay uga qayb qaateen sidii bulshadooda dhibaataysan loo gaadhsiin daawooyin. “Waxaanu wadaynaa dedaalkaasi caafimaad, ilaa inta aanu gebi ahaanba cidhib tirayno xanuunadaasi. Waxaan u mahad celinayaa dhamaanba shaqaalaha wasaaradda caafimaadka, ee ku jira heeganka, ee dedaalaya, ee meel walba maraya” ayuu yidhi wasiir Xaglo-toosiye.